Midawga Yurub Oo Ka Hadlay Diwaangalinta Codbixinta Somaliland |
Midawga Yurub Oo Ka Hadlay Diwaangalinta Codbixinta Somaliland
Hargeysa(GNN)- midawga Yurub ayaa soo dhaweeyay muddaynta wakhtiga ay bilaamayso diwaangalinta codbixiyeyaasha Somaliland. Hadalka midawga Yurub ayaa daba socda madaxweyne Siilaanyo oo shalay xeer ku soo saaray in diwaangalinta codbixintu 16/01/2015 ka bilaamato gobolka Togdheer.
Ergayga midawga Yurub u qaabilsan Somaliland iyo Somalia Mr Michele Cervone Urso ayaa sheegay in midawga Yurub barbar taagan tahay diwaangalinta codbixinta Somaliland “Midawga Yurub waxaa ka go’an inay taageero siiso hannaanka diwaangalinta codbixiyeyaasha Somaliland ee madaxweyne Axmed Maxamed Siilaanyo ku dhawaaqay inay 16-ka bisha bilaamato,” ayuu yidhi danjiraha EU-da oo bartiisa twitter-ka farriintan ku baahiyay.
Guddida doorashada Somaliland ayaa la filayaa inay 16-ka bishan gobolka Togdheer ka bilaabaan diwaangalinta codbixiyeyaasha oo qodobka ugu weyn ee dib u dhigay doorashadii 2015 ahaa. Wali lama sheegin wakhti diwaangalintu soo dhammaanayso, balse waxaa la filayaa in marba gobol laga dhammaystiro.